नयाँ दिल्लीबाट यस्तो जानकारीः यस्तो छ झलनाथ खनालकाे अवस्था ? – Khula kura
नयाँ दिल्लीबाट यस्तो जानकारीः यस्तो छ झलनाथ खनालकाे अवस्था ?
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको छ ।
भारतको नयाँदिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा उपचाररत नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेताका
स्वास्थ्यमा सुधार भएको उनका स्वकीय सचिव कृष्ण भट्टराईले बताए ।
खनालमा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने र खोकी लाग्ने समस्या हटिसकेको छ ।
उपचारमा अक्सिजनको सपोर्ट राखिएकामा हटाइएको छ ।
खनाललाई थप उपचारका लागि यही असार २ गते नयाँ दिल्ली लगिएको थियो ।
नेप्सेमा पहिरो : आज उच्च अङ्कको गिरावट
धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले विभिन्न ५१ वटा कम्पनीको शेयर कारोवार जोमिखपूर्ण भएको बताएपछि नेप्सेमा आज उच्च अङ्कको गिरावट देखिएको हो ।
मन्त्री दीपक मनाङे माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्ने तयारी